ပြည်သူလူထု တင်ပြထားသည့် ပြဿနာများ ဖြေရှုင်းမပေးသည့် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့?? - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကန့်ဘလူမြို့ပေါ်တွင် လူအင်အား ၁၅ဝ ခန့်ဖြင့် ပြဿနာများ ဖြေရှင်းမပေးသည့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှူး နုတ်ထွက် ပေးဟူသည့်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်က ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီခန့်က ကန့်ဘလူမြို့ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက် သံလမ်းဆုံမှစတင်ကာ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး မှူးရုံးလမ်း၊ မြို့နယ်မီးသတ်ရုံးလမ်းနှင့် ရဲစခန်းလမ်းများသို့ပတ်၍ အင်အား ၁၅ဝ ခန့်ဖြင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆန္ဒပြပွဲတွင် ပါဝင်သည့် ဦးနေဇင်လတ်ကဆိုသည်။
”ထန်းကုန်းကျေးရွာကနေ ရွှေဘို-မြစ်ကြီး နားကားလမ်းဘက်ကို ပေ ၃ဝ လမ်း ဖောက်လုပ်တော့ မလွတ်တဲ့မြေယာတွေကို နောက်ဆုတ်ခိုင်းခဲ့တယ်။ နောက်ဆုတ်တဲ့အထဲမှာ ဘာသာရေးအဆောက်အအုံအချို့နဲ့ အခိုင်အမာဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အအုံအချို့ က ဖယ်ပေးကြတယ်။ အခုက ဒေသအရန် မီးသတ်ပရိဝုဏ်အတွင်းက ဆိုင်ခန်းတွေက ရွှေ့မပေးတာ။ အဲဒီကိစ္စကို မြို့နယ်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးကို ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တင်ပြတယ်။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဆောင်ရွက်မပေးလို့ အခုလို ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ”ဟု ဦးနေဇင်လတ်က ပြောသည်။ ဆန္ဒပြပွဲအား လုံခြုံရေးလုပ်ဆောင်ပေး သည့် ရဲအရာရှိကလည်း ”သူတို့က တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်တင်ပြီးမှ ပြကြတာပါ။ အင်အားတင်ထားတာကတော့ ၃ဝဝ တင်တာပါ။ အခု သူတို့ဆန္ဒပြတာက ၁၅ဝ လောက်တော့ရှိမယ်”ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါလမ်းကိစ္စအား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ လမ်းဦးစီးမှူး၊ မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ မှူး၊ စီမံကိန်းဦးစီးမှူး၊ မြို့နယ်အုပ်ရေးမှူးနှင့် လမ်းနယ်မလွတ်သည့် ဆိုင်ခန်းရှင်များ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခဲ့စဉ်က မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ၎င်းနှင့်မသက်ဆိုင်၍ ရှင်းမပေးနိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့သည်ဟု ဦးနေဇင်လတ်ကဆိုသည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ဘလူ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးထံ ဆက်သွယ်ရာတွင် ဆက်သွယ်မရ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆန္ဒပြပွဲတွင် ‘လမ်းစီမံကိန်းဧရိယာနှင့် မလွတ်သော ထန်းကုန်းကျေးရွာမီးသတ်ရုံးနှင့် အငှားချထားသောဆိုင်ခန်းများ အမြန်ဖယ်ရှားပေး’၊ ‘ပြဿနာများ ဖြေရှင်းမပေးသည့် မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှူးနုတ်ထွက်ပေး’၊ ‘ပြဿနာများ ဖြေရှင်းမပေးသည့် မြို့နယ်အုပ် ချုပ်ရေးမှူး နုတ်ထွက်ပေး’ဟု ကြွေးကြော်သံသုံးခုဖြင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလမ်းဖောက်လုပ်မှုအတွက် တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရ၏ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘတ်ဂျက် ဖြင့် ယခုလ လဆန်းပိုင်းမှစတင်ကာ ကျေး လက်လမ်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူဖောက်လုပ် လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ဟီဂူအင်အတွက် ချဲလ်ဆီးထံမှ ဆက်သွယ်မှု မရှိကြောင်း လီယိုနာဒိုရှင်းလင်း၊ နည်းပြ ဂတ်တူဆိုကို ရ?
ဦးကိုနီ သတ်ခံရမှု အောင်ဝင်းထွန်းကို စစ်မေးနေစဉ် ကျန်းမာရေး ဖောက်လာသဖြင့် တရားခွင် ရပ်နားခ??